Hatisi Vanhu VeNyama
"Ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti mune hupenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita romwanakomana waMwari" (1 Johane 5 ndima 13).
Apostora Johane ndiye akanyora ndima yatavhura nayo. Akanga ari kutaura kuVakristu. Akanga ari kuvati, "Mune hupenyu husingaperi. Ndizvo zvandinoda kuti muzive". Saka Vakristu havasi vanhu venyama. Vakasiyana nevanhu venyika ino. Izvi ndizvo zvazvinoreva.
Iwe hauchisiri munhu wenyama. Wasiyana nevanhu venyika ino. Hauchisiri werudzi rwavo. Ichi ndicho chokwadi. Unofanira kuchigamuchira. Unofanira kuchitenda. Unofanira kuchinzwisisa. Zvisizvo, unozotambudzwa nezvinhu zvinotambudza vanhu venyika ino. Unozokanganiswa nezvinhu zvenyika ino. Isu tava vanhu verudzi rwaMwari. Tava kuverengerwa kudivi reVamwari. Saka hatichatongwi nezvinhu zvenyika ino. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Tinozviverenga muna 2 Petro 1 ndima 4.
Kuda iwe wakazvarwa patsva. Izvi zvinoreva kuti wakazvarwa kechipiri. Uku kwakanga kuchitova kuzvarwa chaiko. 2 VaKorinte 5 ndima 17 inoti, "Saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva, zvinhu zvakare zvapfuvura; tarirai, zvose zvava zvitsva". Mashoko aya ndeechokwadi. Harisi dimikira. Munhu anogona kuva muna Kristu. Munhu uyu anenge atozvarirwa muna Kristu. Anenge anyikwa muna Kristu. Izvi ndizvo zvatinotaridzwa muna VaGaratia 3 ndima 27. Ndizvo zvawakaitwa iwe. Wakanyikwa muna Kristu. Wavhengana navo. Wava werudzi rumwe navo.
Saka wava weropa raMwari. Wava werudzi rwaMwari. Wasiyana nevanhu venyika ino. Hauchisiri werudzi rwevanhu venyika ino. Izvi ndizvo zvinotaura Bhaibheri. Rudzi rwekare rwakabviswa mauri. Rwakaroverwa pamuchinjikwa. Rwakaroverwa pamwe chete naKristu. Izvi ndizvo zvatinoverenga muna VaRoma 6 ndima 6. Wava weropa idzva. Wava werudzi rutsva. Urwu rudzi rwevanhu vaya vakafa, vakazomuka.
Jakobo 1 ndima 18 inoti, "Nokuda kwake wakatibereka neshoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko chokutanga chezvisikwa zvake". Mundima iyi mune mashoko anoti, "kuti isu tiite sechibereko chokutanga". Saka tava imwe mhando yevanhu. Ndizvo zvinoreva ndima iyi. Vanhu ava ndeve rudzi rwaVamwari. Hatina kungodzidziswa nezvaKristu chete. Tava verudzi rwaKristu. Tava munhu mumwe chete navo. Tava verudzi rweVamwari. Takashanduka patakazvarwa patsva. Ndiko kusaka Jesu vakataura vachiti, "Hazvina kunyorwa here mumurairo wenyu, zvichinzi: Ndakati: Muri vamwari?" Tinoverenga mashoko aya muna Johane 10 ndima 34. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Mweya wangu wava werudzi rwaMwari. Wava weropa reVamwari. Saka ndava munhu werudzi rweVamwari. Handichisiri munhu wenyama. Handina kungodzidziswa nezvaKristu chete. Ndava munhu mumwe chete navo. Ndava werudzi rwavo. Saka ndava kuverengerwa kuboka reVamwari. Ndinonzwisisa rudzi rwangu! Saka ndinotonga panyika pano. Ndinokurira zvinhu zvenyika ino. Ndinozvikurira ndichishandisa simba raMweya Mutsvene. Ameni!
Johane 1:12-13 CEV
Chishanu, 6 Zvita 2019)